Priti Patel: Xoghayaha horumarinta caalimiga ee Britain ayaa ku baaqaysa gargaar waxtar leh - BBC News Somali
Priti Patel: Xoghayaha horumarinta caalimiga ee Britain ayaa ku baaqaysa gargaar waxtar leh
Image caption Priti Patel oo booqanaysa dekadda Mombasa
Priti Patel ayaa dhex taagan dhismaha laga maamulo dekadda Mombasa ee bariga xeebta Kenya. Dariishadaha waxay ka dhex arkaysaa badda oo ah halka ay maraan ganacsiga bariga Afrika.
Xoghayaha horumarinta caalamiga ee Britain Priti Patel, ayaa dhagaysanaysa sida lacagta canshuurta Britain loogu qarashgareeyo si loo caawiyo waddamada shisheeye inay kordhiyaan dhaqaalahooda.
Gargaarka noocan oo kale Ms Patel waa waxa ay jeceshahay : wuxuu ka dhaxeeyaa laba waddan, waa wax la beegsaday, oo si sahlan loo qiimayn karo.
Waad tirin kartaa jidadka cusub ee laamiga laga dhigay, baroosinyo maraakiibta ku soo xirtaan oo la dhisay, mashiinada wax lagu baaro oo cusub oo wasaaradeeda ay bixinayso si loo fududeeyo in alaabada ay soo gasho kana baxdo dekadda.
Ujeedadana waa cadahay: si loo caawiyo horumarka dhaqaalaha Kenya si ay mustaqbalka u yarayso saboolnimada waddankeeda iyadoo aan helin gargaar shisheeye.
Laakiin, waxaa kaloo jira ajenda kale. Waana mid cad. Ms Patel ayaa doonaysa in awooda horumarka Britain loo isticmaalo wax badan waxyaabaha Britain faa'iidada u leh.
Marka waxay doonaysaa in gargaarka loo isticmaalo in lagu yareeyo dadka ka soo tahriibaya Afrika oo imanaya Yurub. Waxay doonaysaa inay gargaarka u isticmaasho heshiisyada ganacsiga ee Britain kadib markii Britain ay ka baxday Yurub iyo in saaxiibo lagu yeesho ururka ganacsiga adduunka ee WTO.
Waxay kaloo rabtaa in gargaarka Britain loo isticmaalo gaar ahaan degenaanshaha iyo ammaanka oo lagu joojin karo dadka xun inay imaadaan Britain.
Image caption Gargaarka Britain ayaa la doonayaa in lagu horumariyo dhaqaalaha iyo ganacsiga si loo yareeyo saboolnimada
Dhaleecayn waqti dheer
Tani waa sii waditaan istaraatijadii David Cameron, ee gargaarka ee la daabacay sanadkii hore, ee lagu hubinayo in kala bar gargaarka Britain ee dhan £12 bilyan lagu qarash gareeyo waddamada xaaladaha adag ku jira.
Dhinaca kale waxay ka jawaabaysaa waxyaabaha muhiimka u ah siyaasadda arrimaha dibadda ee Theresa May, oo xooga saaraysa waxa faa'iidada u leh Britain. Sidoo kale waxay ka jawaabaysaa ajendaha Ms Patel.
Waxay waqti dheer dhaleecaysay lacagta lagu bixiyo qaar ka mid ah gargaar Britain. Baarlamaankii hore waxay ku talisay in labaa'bi'iyo wasaarada horumarinta caalaiga oo lagu badalo wasaarad ganacsi oo cusub.
Bilaha tan iyo intii loo magacaabay jagada, waxay u sheegtay wargayska Daily Mail iyo Mail on Sunday sida ay u qorshaynayso inay joojiso lacag qasaarinta gargaarka oo aad ay uga xanaaqdo.
Inta ay joogtay Kenya, waxay sheegtay qorshaha ay ku jarayso mashaariicda ay sameeyaan hayadaha hadii aysan samayn wixii ay balanqaadeen.
Dowladda ayaa doonaysa inay adkayso qarashka gargaarka, iyadoo hubinaysa faa'iidada uu leeyahay. Waxaa goor dhow la daabacayaa dib u eegid lagu sameeyay lacagaha lagu bixiyo barnaamijyada ay samaynayaan dowladaha iyo kuwa hayadaha caalamiga. Lacagtan ayaa aad muhiim ugu ah hayadaha aan dowliga ahayn iyo kuwa gargaarka.
Hayadaha dib loo eegayo shaqadooda waxaa ka mid ah Bangiga Adduunka, Midowga Yurub iyo hay'ado kale oo yaryar. Waxay qarash gareeyaan 40% lacagta gargaarka ee Britain.
Waa markii ugu horaysay ee dib loogu eegayo lacagta la siiyo hayadahan muddo shan sano ah.